Xisbi leh miisaan culus oo uu hogaaminayo Xasan Sheekh oo looga dhawaaqay Muqdisho. – Madal Furan
Hoy > Warka > Xisbi leh miisaan culus oo uu hogaaminayo Xasan Sheekh oo looga dhawaaqay Muqdisho.
Xisbi leh miisaan culus oo uu hogaaminayo Xasan Sheekh oo looga dhawaaqay Muqdisho.
Editor September 30, 2018 Warka 0
Muqdisho (Madal Furan) – Xisbi lagu magacaabo Midowga Nabadda iyo Dimoqraadiyadda (UPD) oo hormuud ka yahay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa maanta looga dhawaaqay magaaladda Muqdisho.
Xisbiyada Daljir, Kutlada Horusocod, UDP iyo Siyaasiyiin kale ayaa la rumeysan yahay inay ku midoobeen Xisbigan cusub, Astaanta uu Xisbiga cusubi yeelanayo ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay, waxaana maalinimada Khamiista la filayaa in la qaban doonaa shirweyne lagu ansixin doono Xeerka uu xisbigaasi yeelan doono.
Xubnaha uXisbigan cusub ee UPD ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwo siyaasadda magac ku leh intooda badanina ay ka tirsan yihiin Aqal Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Sxisbigan UPD oo ah xisbi ay ku midoobeen kooxaha mucaaradka ah ayaa la saadaalinayaa inuu noqon doono xisbiga ugu weyn ee ay yeelan doonaan mucaaradka ugu miisaanka culus, Xubno ka tirsan Xisbiga Daljir oo shalay ku shiray magaaladda Muqdisho ayaa isku raacay inay si buuxda ula midoobaan xisbiga cusub PDP.
Itoobiya oo dayax-gacmeed hawada u diri doonta dhowaan
Ciidamada Mareykanka oo duqeymaha ka dhanka Al-shaab joogto ka dhigay
Akhriso:- Guddiga doorashooyinka oo Jubbaland looga dhawaaqay.